Lahow Cinwaankaaga! | Martech Zone
Isniin, Janaayo 8, 2007 Tuesday, April 5, 2016 Douglas Karr
Mid ka mid ah astaamaha cusub ee Blogger waa inaad ku martigelin karto arjiga boggaaga. (Waxaan ogaaday inay ku bixiyaan adeegsiga soo gelitaanka Koontadaada Google ee barta cusub, sidoo kale. Taasi way fiican tahay). WordPress waxay soo bandhigtay inay martigeliso balooggaaga, u-habeynta mawduucaaga, ku darista waxyaabo badan, iwm. Waxaan aaminsanahay inay tahay mid ka mid ah sababaha muhiimka ah ee aan u doortay WordPress… Waxaan doonayay inaan lahaado domainkeyga.
Dhibaatada bilaabista bartaada iyo ku socodsiinta mid ka mid ah meheradaha badan, vox, teeb, blogger, ama WordPress, ayaa ah inay iyagu leeyihiin taraafikadaada, ee aanad adigu lahayn. Waxaad ku tiirsan tahay adeegeyaashooda, barnaamijyadooda isbeddelaya, waqtigooda, wax walba! Waxa kaliya ee aad 'iska leedahay' waa codkaaga.
Taasi maaha arrin weyn haddii aad rabto inaad joornaal ku haysato halkaas. Laakiin inaad maskaxdaada ka bedesho wadada oo aad go'aansato inaad rabto inaad dhab ka ahaato baloog garaynta, laga yaabee inaad xoogaa xayeysiis ah hesho, iwm, oo maxaad qiyaasi kartaa? Waad kuxirantahay… dhamaan matoorada waaweyn ee raadinta hada codkaaga (content) ayaa lagusoo qoraa bogga qof kale. Taasi waxay ka dhigan tahay inay iyagu leeyihiin taraafikada, adigu ma lihid.
Oo maxaa dhacaya haddii ay caloosha kor u kacaan? Kawaran haddii waxqabadkooda adeeggooda ama softiweerku ay si aan macquul ahayn u baqaan oo aad u baahan tahay inaad ka tagtid. Nasiib wanaagse, waad kuqaadan kartaa qoraaladaada laakiin, nasiib daro, maheli kartid tixraaca mashiinka raadinta. Taasi dib ayey kuu dhigi kartaa usbuucyo iyo bilo intaad qof walba ka sugeyso inaad boggaaga cusbooneysiiso oo aad cusbooneysiiso dhammaan tixraacyadooda boggaaga. Toddobaadkan dhammaadkiisa, waxaan u guuriyey degelkeyga koonto kale, dhammaan xiriiriyeyaashayda iyo natiijooyinka raadintuna waxay u sii shaqeeyaan sidii ay horayba u shaqeyn jireen. Waxaan sidoo kale kugula talin lahaa inaad adeegsato qaab dhismeedka isku xirka joogtada ah si haddii aad u gudubto meel kale, waxaad ilaalin kartaa qaab dhismeedkaaga isku xirka.
Taladayda ku socota qorayaasha cusub?
Lahaanshaha barta blog-kaaga! Xitaa ha u oggolaan 'farsamadaada' inay kuu diiwaangeliso adiga. Waxaad u baahan tahay inaad iska leedahay, waxaad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso, waxaad u baahan tahay inaad la socoto. Lahaanshaha degmo waxay lamid tahay lahaanshaha cinwaankaaga dariiqa, ma ku ridi doontaa hantidaas maguurtada ah magaca qof kale? Maxaad ugu samayn lahayd ganacsigaaga ama balooggaaga?
Taladayda ku saabsan barxadaha wax lagu qoro?
U fidiso adeegyo magac adeege. Tani waxay ii oggolaaneysaa inaan iska diiwaangeliyo magac domain diiwaangeliyaha aan jeclahay, laakiin farta ku fiiqo adeegeyga magacayga bartaada. Haddii aan go'aansado inaan u wareejiyo balooggeyga ama degelkeyga martigeliye kale, waxaan si fudud u dhaqaajin karaa degelkeyga oo aan cusbooneysiin karaa adeegeyga magacayga. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa 'bixinta halkii adeeg' sidoo kale. Waan iska ilaalin lahaa adeegyada diiwaangelinta magaca domain tan iyo markii ay xanuun ku noqon karaan badhida waana inaad kudartaa dhammaan noocyada taageerada iyo is-dhexgalka bartaada. Laakiin haysashada server magac domain ah oo tilmaamaya http://mydomain.com in http://mydomain.theirdomain.com waa wax fudud.
Tags: domainmagaca domainleedahay magacaaga domain
Boostada Tooska ah ee Shaqeysa!
Waan ku raacsanahay gebi ahaanba, Douglas. Maxaa loogu wareejinayaa xakamaynta waxyaabaha ku jira aad qof kale loo abuuray?
Waxaan xasuustaa markii ay ahayd inaan bixiyo $ 72 degelkeygii ugu horreeyay, laakiin maalmahan kharashku runti sabab uma ahan helitaanka boggaaga. Weli waxaa jira magacyo badan oo hal abuur leh oo la heli karo. (Kuwaasina waxay ka imanayaan uun hal-galab-cilmi-baaris…).
Qoraal gebi ahaanba ka duwan, illaa iyo intaad u xustay moodeel ganacsi oo loogu talagalay bixiyeyaasha barta wax lagu qoro; Waxaan had iyo jeer la yaabay: sidee WordPress lacag u sameeyaa? Ma deeqo uun baa, oo taasi run ahaantii ma shaqaysaa?
Waxaan layaabay xaqiiqda ah in milkiilaha wikipedia uu diidan yahay in xayeysiisyo xayeysiis ah ay ku yeeshaan bartooda. Ixtiraam!
Jan 9, 2007 saacadu markay ahayd 2:01 PM
Waxaan soo maray dhibka aan ka daahay helitaanka magac domain. Sababta aan u iibsaday magacayga domain waxay ahayd aniga oo doonayay in aan inbadan tijaabiyo. Si kastaba ha noqotee, waxaan dareemay xanuunka dhaqaaqa.
Waxaa jira wax cajiib ah ku dheji Xirmooyinka Miyir-qabka talaabooyinka la qaadayo si aad ugu guurto bartaada WordPress-ka barta u gaarka ah!
Waad ku mahadsantahay tixraaca qoraalkayga, Doug. Waan ku qanacsanahay.
Waxaan ku jiraa heshiis buuxa oo ku saabsan lahaanshaha boggaaga sida ugu dhakhsaha badan haddii aan sax ahayn laga bilaabo bilowga qorista. Waxaad fureysaa fursado badan oo naftaada ah. Wax walbana waxay u muuqdaan inay korayaan. Waxaad bilaabi kartaa inaad tijaabiso si aad u aragto inaad jeceshahay oo kale, oo markaa isticmaal barnaamijka qof kale. Laakiin hadaad ogaato inaad jeceshahay oo aad rabto xorriyad dheeraad ah, waxaad ku casuuntay shaqooyin badan naftaada iyo cawaaqibka kale ee aad ka hadashay.